Degmada Baydhaba oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Baydhaba oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Degmada Baydhaba oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenkii ugu dambeeyey wareegga koobaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo waxaa ku tartamay degmooyinka Baydhaba oo ka tirsan gobolka Baay iyo Yaaqshiid oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Qeybta hore ee tartanka, waxaa labada degmo la weydiiyey min afar su’aal, iyadoo kaddib qeybta nasashada lagu soo gudbiyey warbixinnadii ka hadlayey Taariikhda labada degmo.
Labada degmo ayaa dhammaadka tartanka isku dhinac dhacay oo la yimaadey mid sideed dhibcood, guddiga tartanka ayaa sheegay in loo baahan yahay su’aallo dheeri ah, si loo kala saaro tartamayaasha.
Degmada Yaaqshiid ee gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, waxa ay si sax ah uga jawaabbeen afar su’aal, iyagoo helay siddeed dhibcood ( 8dhibcood).
Degmada Baydhaba ee gobolka Baay, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, waxa ay iyaguna ka jawaabbeen shan su’aal oo afar ka mid ah ay toos uga jawaabbeen hal su’aalna ay si ka faa’ideysi ah uga jawaabbeen, sidaas ayeey ku heleen toban dhibcood (10 dhibcood).
Caawa ayaa la soo gabogabeeyey wareeggii koobaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka, iyadoo habeen dambe lagu bilaabi doono wareegga labaad degmooyinka Warta-nabadda oo ka tirsan gobolka Benaadir iyo degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Previous articleMadaxweynaha Koonfurgalbeed oo dhagax dhigay garoon laga hirgelinayo Baraawe
Next articleTaliyeyaasha ciidamada oo soo saaray awaamiir dhinaca amniga iyo digniin cusub (Akhriso)